The 7 Best Standing Desk Mats mba hividy amin'ny 2018
Buying Guides Gadgets
Na miasa any amin'ny birao iray manontolo andro na chef amin'ny trano fisakafoanana dimy kintana iray ianao, mijoro eo amin'ny tongotra mandritra ny ora maro dia miha-betsaka na dia ny fahasalamana misy eo amintsika aza. Soa ihany fa misy marika fanontam-pirinty, na matsiro manohitra ny fatin-doha, izay fantatra amin'ny ankapobeny, dia afaka manao zava-mahagaga amin'ny tongotrao, ny tongotrao, ny rambony ary ny kibony. Amin'ny fampihenana ny tsy fahampian-tsakafo, afaka mamela anao hijanona ela kokoa sy miaraka amin'ny fampionona mafy kokoa raha oharina amin'ny karipetra na rambony mangatsiaka. Amin'ny farany dia ho hitanao haingana fa ny matoatiora mitsangana dia hanampy anao hahatsapa ho mavitrika kokoa sy mavitrika amin'ny asa na ao an-trano.
Raha olo-mavitrika mazoto mikaroka kokoa ianao, ny Topo mat 26.2 x 29 x 2.7-inch dia safidy tsara indrindra izay manamarina ny boaty rehetra eo amin'ny latabatra fisakafoana. Nanao fitaovana mba hapetraka mora foana amin'ny tongotra iray monja ny Topo, ka mahatonga anao hifindra sy hikorontana rehefa mijoro eo amin'ny fonon-tsela kofehy vita amin'ny polyurethane. Topo dia manorina ny hevitra fa tsy tahaka ny bala na balafomanga, ny fihetsiketsehana dia tsy mahatsiaro tena ary manala ireo fanelingelana tsy nirina amin'ny saka iray izay maneso ny toerana manodidina ny tontolo voajanahary. Amin'ny fiafaran'ny andro, ny fahafahana mamakivaky ny tongotrao, mijoro amin'ny tongotra iray, mandeha amin'ny tongotra na mijoro amin'ny tongotra iray amin'ny tany rehetra dia manompo mba hanafoanana ny tsindry eo amin'ny lamosina, ny tongotra, ny soroka ary ny kiraro. Manohitra ny fandotoana, fanasan-dàlana ary tonga miaraka amin'ny fiantohana fito taona.
Raha toa ny fitsaboana amin'ny herisetra dia ny fehezanteny iray misy anao, ny Ergohead Standing Desk Mat no safidy tsara indrindra. Misy toerana roa manasitrana eo anoloana, izay natao hanampiana ny fampidiran-dra sy ny fanararaotan'ny rà. Ireo lalan-drivotra telo manerana ny andaniny sy ny fanampiana an-trano dia mitondra fihetsiketsehana sy fihetsika fanampiny mba hampihenana ny reraka. Misaotra 26 x 28 x 2.6 santimetatra ny habe, ny Ergohead dia tena tsara ho an'ny toerana lehibe izay efa anananao ny toerana sy ny hetsika. Amin'ny fametrahana ny sisin-dàlana tsy misy tanana, dia mamerina mora foana eny amin'ny efitrano malalaka. Izy io dia vita avy amin'ny foitran'ny polyurethane 100 isan-jato ary mahatsapa fiononana.
Ny tsara indrindra ho an'ireo afisy afoy afovoan-dry zareo izay mankafy fiovàna haingana mandritra ny andro fiasana; Ny kitapo polyurethane matotra ara-tontolo iainana mora miala avy eo ambany birao iray miaraka amin'ny tongotra iray monja mba hikolokoloana haingana mandritra ny andro. Ny fihenan'ny elanelana eo amin'ny elatry ny mats dia manome toerana voajanahary izay hianjera ny baolin'ny tongotrao, izay manampy amin'ny fananganana traikefa mampangatsiaka sy mahazatra ho an'ny tongotra. Ny fitaovana fanampiny nasandratra eo afovoan'ny matavy, ary koa ny manodidina ny sisiny ivelany, dia manolotra safidy maro ho an'ny toerana ho an'ny fitomboan'ny fahafaha-mihetsika sy ny hetsika ho an'ny fitongilanana diagonal izay mandingana ny tongotrao. Izy io dia misy amin'ny loko telo ary 37.2 x 25 x 3.5 santimetatra lehibe.
Tsy misy kofehy matevina na fefy eo amin'ny CumulusPRO Commercial Couture Anti-Fatigue Comfort Mat, fa izany indrindra no teboka. Ahitana matevina sy mainty ary mirefy 24 x 36 x .75 santimetatra, mandray ny fanampiana avy amin'ny teknolojia kentrona sy foitra polyurethane mba hamenana ny reraka. Ankoatr'izay, ny CumulusPRO dia safidy tsara indrindra ho an'ny andro iray manontolo raha tsy manala kiraro. Manana fiantohana mandritra ny androm-piainany izy io, nefa koa poretina-porofo, noho ny soritr'aretina vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra.
Raha ambony avo be mandritra ny andro ny lisitra, ny TerraMat Standing Desk Mat dia safidy mahafinaritra izay manolotra toerana maro ho an'ny karazana tongotra sy toeran'ny tongotra. Mahatratra 30 x 27 x 2,5 santimetatra ny habeny, ny TerraMat dia manolotra fitambarana 11 samihafa, izay ahafahanao mahita hetsika maro sy fomba hanamboarana indray mandritra ny tontolo andro. Ny ampahany miaro amin'ny ratra amin'ny matsiro ao amin'ny matihazo dia manolotra fiatoana ho an'ny tongotra, fa ny faritra somary marefo kosa dia manome ny tongotrao sy ny arches kely. Ny làlam-panampiana sy ny kodiaran-kery dia manampy amin'ny fametrahana tongotra hafa hanamboarana zanak'omby ivelany ary ny tendron-tsindrim-peo dia mangataka anao hanaisotra ny kiraro ary hamoha ny tongotra miaraka amin'ny fanentanana tsotsotra. Ny baran'ny balafomie dia mifototra amin'ny toeran'ny toerana mety tsara, izay natao ho an'ny tongotra hikolokolo ao amin'ny bar (afaka manova tongotra na mametraka ny tongotra roa).
Ny fiaraha-miombon'antoka ara-tontolo iainana sy misy amin'ny loko efatra samihafa, ny Sky Mat Comfort Anti-Fatigue Mat dia safidy tsara ho an'ny olona mitady fikorontanana tsy misy lozam-pifaliana na fanafody. Ny fihenan'ny tsindry eo amin'ny tongotrao, ny lohalika ary ny latsaka ambany dia miakatra hatramin'ny 32 isan-jato, ny andro fiasana valo amin'ny adiny dia handeha tsy amim-pahombiazana rehefa tongotra sy tongotra ny tongotrao mamelombelona sy miala sasatra rehefa vonona ny hody any an-trano ianao. Ny famoahana 20 x 39 x .75 santimetatra, ny haben'ny totalin'ny matsara dia manome fihetsiketsehana be dia be mandritra ny andro mba hampitombo ny fivoaran'ny ra. Ny fanamarihan'ny mpampiasa dia midera ny Sky Mat noho ny fikojakojana ny endriny sy ny fahatsapany mamaivay nandritra ny taona maro taorian'ny nividianana tsy nisy fiatoana na ranomaso nanodidina ny sisiny. Ny ala misy kirany dia misakana ny fandehanan-javatra raha mandeha eny an-tsaha na miaraka amin'ny kiraro.
Tsy maharitra ny andro rehetra. Na ny asa na ny lalao, indraindray mila fialana ianao, izay misy ny fampisehoana mahatsikaiky momba ny "Anti-Fatigue Royal". Meny fitetezana 20 x 39 x 75 santimetatra ny haavony ary manamaivana hatramin'ny 40 isan-jaton'ny fanerena eo amin'ny tongotrao, lohalika, ambany ambany sy kofehy. Ny tetik'ady maharitra dia miantoka ny matsiro tsy hivezivezy malalaka ary koa ny fanasaziana- ary ny ranomaso tsy azo ivalozana. Tonga amin'ny loko isan-karazany izy, anisan'izany ny mainty hoditra, burgundy ary caramel mena.
Amin'ny mpanoratra, mpanoratra manam-pahaizana dia manolo-tena hikaroka sy hanoratra fanadihadina sy fanadihadiana mahaleo tena momba ny vokatra tsara indrindra ho an'ny fiainanao sy ny fianakavianao. Raha tianao ny ataontsika dia afaka manohana antsika amin'ny rohy voafidy isika, izay manangom-bola antsika. Mianara bebe kokoa momba ny fizotran'ny famerenana .
Ny 7 Best CB Radios hividy amin'ny 2018
Ny 7 Best Walkie Talkies hividy amin'ny 2018
Ny Gitara Elekta 7 Tsara Indrindra hividy amin'ny 2018 ho an'ny Under $ 500
Ny 7 tsara indrindra amin'ny Airplane Control Air amin'ny Buy amin'ny 2018
Fitetezam-paritra ara-pahasalamana izay mitazona ny sainao
Ny 11 Best Mini Projectors Hividy ny 2018
Ny 8 Best Electric Skateboards hividy amin'ny 2018
The 8 Best Home Security Systems mba hividy amin'ny 2018 ho an'ny Under $ 100
Ny 8 Best EDC (Everyday Carry) Flashlights mividy amin'ny 2018
Inona no tokony ho fantatra momba ny filalaovana spam Bayesian
Shrek Kart HD Review
Fanomezana fanomezana ho an'ny Xbox One Owners
Hitachi HSB40B16 Bluetooth-nadika feo - Review
Ampianaro lesona tsotra amin'ny fampiasana PowerPoint
Nahoana ny lanjan'ny horonam-peo rehefa mihaino mozika?
Ahoana ny fomba fampiasa amin'ny Internet Explorer 8 amin'ny Internet
Famaranana tsy fahampian-tsakafo diso - Ny loham-pamokarana dia mamaky irery
The 6 Best Heense TVs hividy amin'ny 2018
Torohevitra momba ny fampiasana ireo Option Optimized Searchoptify
Ireo 7 tsara indrindra Polk Audio mpividy mba hividy amin'ny 2018
Excel SIN Fomba: Jereo ny Famoronana Angelava
Ny fomba tsotra indrindra hanesorana sy hijanonana ny loha-hevitra
Ny tsara indrindra amin'ny 22-inch LCD Monitors
Fomba 7 hianarany Linux amin'ny endriny iray
Ahoana ny fitsapana ny haavo Internet?
Manana olana amin'ny iTunes, iPhone, na iPad Synod eo amin'ny iTunes ve ianao?
NuVo Whole Home Audio System - Sary Profile
Ahoana ny fampidirana sary an-tsarimihetsika ho an'ny hafatra ao amin'ny Mozilla Thunderbird
Ahoana no fomba hanitsiana ny fametrahana ny loko miloko amin'ny Windows XP?
Ahoana ny fomba fampiasana mozika mivezivezy amin'ny alalan'ny Mac